Hawaay - Wikipedia
"Hawaay Wiilkeeda runta ah"
Af-Hawaay iyo Af-Ingiriis
- Total 28,311 km2 km²
- Biyo (%) 41.2
- 2008 qiyaas 1,288,198
Hawaay waa Gobolo jasiirado ka sameesan, oo ku yaalo dhaxbartanka Badweynta Baasifik.
Hawaay waxee ka midtahay 50'ka goboleed ee mareykanka. Haweeni [həvɐjʔi]) waa gobolka 50-aad ee ugu dambeeyay ee ku biiray Maraykanka, isagoo helay dowladnimada 21-kii Agoosto, 1959. Hawaii waa gobolka keliya ee Maraykanka ku yaala Oia Galbeed iyo kan keliya oo ka kooban jasiiradaha oo dhan. Waa jasiiradda waqooyiga ee ku taala Polynesia, oo ku taal inta badan jasiiradaha ku yaal bartamaha bartamaha badda. Hawaii waa gobolka keliya ee Maraykanka ku yaal dibedda Waqooyiga Ameerika.
Gobolka wuxuu ku dhowyahay dhammaan jasiiradaha jasiiradaha Hawaii, oo ka kooban boqolaal jasiirado ah oo ku faafaya 1,500 mayl (2,400 km). Xagga koonfureed ee jasiiradaha jilicsan, siddeed jasiiradood oo waaweyn waxay u kala baxaan waqooyi-galbeed ilaa koonfur: Ni'ihau, Kaua'i, O'ahu, Moloka'i, Lāna'i, Kaho'olawe, Maui, iyo Island of Hawai'i. Ugu dambeyntii waa jasiiradda ugu weyn ee kooxda; waxaa badanaa la yiraahdaa "Big Island" ama "Hawai'i Island" si looga fogaado jahawareerka gobolka ama jasiiradaha. Goobaha jilicsan waa jimicsi ahaan iyo qowmiyadeed ahaan qayb ka mid ah jinsiyadaha Polynesian ee gobolka Oceania.
Dabiicadda dabiiciga ah ee Hawaii, cimilada kulaylaha, kulaylka dadwaynaha, hareeraha xeebta, iyo volcanoes firfircoon waxay ka dhigtaa meel caan ah oo loogu talagalay dalxiisayaasha, foorjoogayaal, bayoolaji yaqaanno, iyo faytopoolayaal. Sababtoo ah mawqifkeeda bartamaha Pacific iyo qarniga 19-aad ee hijradda shaqada, dhaqanka Hawaii wuxuu si aad ah u saameeyaa dhaqamada Waqooyiga Ameerika iyo Bariga Aasiya, marka lagu daro dhaqanka dhaqameed ee Hawaiian. Hawaii waxay haysataa in ka badan hal milyan oo deggan oo joogto ah, oo ay la socdaan martida badan iyo shaqaale milatari oo Mareykan ah. Caasimaddu waa Honolulu jasiiradda O'ahu.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Hawaay&oldid=220372"
Last edited on 19 Oktoobar 2021, at 06:51
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 19 Oktoobar 2021, marka ee eheed 06:51.